Inona no atao hoe Marketing Viral? Ohatra vitsivitsy sy ny antony niasan'izy ireo (na tsia) | Martech Zone
Alakamisy Oktobra Oktobra 2, 2014 Zoma, Oktobra 3, 2014 Douglas Karr
Miaraka amin'ny lazan'ny haino aman-jery sosialy, manantena aho fa ny ankamaroan'ny orinasa dia mamakafaka ny fampielezan-kevitra rehetra ataon'izy ireo miaraka amin'ny fanantenana ny hizarana izany amin'ny alàlan'ny vava mba hampitomboana ny fahafaha-mahazo azy sy ny tanjany.
Viral marketing dia manondro teknika iray izay kendren'ireo mpahay tetikady votoaty hamolavola votoaty izay mora entina sy mahasarika be tokoa ka zarain'ny olona maro. Ny fiara no singa fototra - ny filàna ny mpanelanelana hiparitaka amin'ny alàlan'ny olona fa tsy mandoa be amin'ny fampiroboroboana na ny airplay. Malaza be ny horonantsary mahatsikaiky, saingy misy ihany koa ny meme sary, ary na dia ny fandrisihana nizara izay miasa toy ny fihenam-bidy ataon'ny vondrona aza.
Ity misy topy tsara momba ny fotoana tsingerina
From Emerson Spartz, manam-pahaizana momba ny virtoaly amin'ny Internet.
Ohatra amin'ny fampielezan-kevitra momba ny varotra viriosy
Dove Real (ly) Tsara tarehy
Kamio Volvo miaraka amin'i Jean-Claude Van Damme.
Izay niteraka Delov Digital's kinova Chuck Norris niomerika
ary 22 Jump Street's dikan miaraka amin'i Channing Tatum.
Ny sary avy amin'ny Diplaom-barotra tsara indrindra manome ihany koa torohevitra vitsivitsy momba ny fanampiana ny atiny ho lasa viral ary koa ny tokony hialana rehefa mamorona fanentanana natao ho lasa viral.
Tags: Horonantsary viralin'i Channing Tatumvoromailala tena hatsaranadoka fampielezana voronaemerson spartzjean-claude van damme viral videoviralin'ny viralmarketing viraltetikady viralhoronan-tsaryhoronantsary viralin'ny kamio volvoinona ny atiny viralinyinona no atao hoe marketing viral
6 Okt 2014 amin'ny 4:42 PM
Tena tian'ity lahatsoratra ity! Hiresaka izany aho rehefa mikasa ny paikadim-barotra momba ny votoatiny manokana.
6 Okt 2014 amin'ny 9:14 PM
Tiako ny fomba nitenenanao fa tsy tokony hikasa ny hanao ezaka be dia be izahay. Ity fomba ity dia kolokoloina, ary ny pitsopitsony dia nomanina tsara. Ny fifamatorana amin'ny hetsika ankehitriny dia mety ho fanovana na ezaka amin'ny fanaovana viral na tsia, eritreritra mahaliana.
6 Okt 2014 amin'ny 11:42 PM
Zack - tokoa. Na ireo matihanina miasa amin'ny fampielezana dokam-barotra viral dia mahalala fa misy ny loza mety hitranga raha tsy mandeha izy. Noho izany antony izany, miasa izahay mba hahazoana antoka fa ny fampielezan-kevitray dia manisy karazana lanja foana fa tsy manandrana vazivazy na hafahafa fotsiny. Amin'izany fomba izany, raha misidina izy ireo, dia mety hanome lanja kely an'ireo mpihaino tery izay tratra!
Oct 9, 2014 amin'ny 6: 56 AM
Lahatsoratra tsara Tena tiako izany. Misaotra nizara ireto ohatra ireto. Betsaka ny asa mafy sy ny loza mety hitranga amin'ny fanaovana dokambarotra an-tsokosoko. Mampalahelo, raha tsy mandeha amin'ny laoniny izany, dia miaiky tanteraka aho fa tsy tokony handrafitra ny fampielezan-kevitra isika raha heverintsika fa ho lasa viriosy io. Miandrandra lahatsoratra mahaliana toy izany.
4 Nov 2016 tamin'ny 8:55 PM
Ohatra tena tsara amin'ny marketing viral